मोदीको लोकप्रियता घट्यो
२०७४ चैत १ बिहिबार
चैत १ – गोरखपुर तथा फूलपुरको चुनावी नतिजा भारतीय जनता पार्टीका लागि एउटा ठूलो धक्का हो । किनभने यी क्षेत्रबाट उसको मुख्यमन्त्री तथा उप–मुख्यमन्त्रीले एक लाखभन्दा बढी मतान्तरले जितेका थिए ।
यी दुवै सिट त्यही उत्तर प्रदेशको हो जसले सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको शानदार जितको बाटो तय भएको थियो । तर अहिले तीनै दुई सिट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा बीजेपीका लागि खतराको घण्टीका रुपमा प्रकट भएका छन् ।
तर हरेक चुनावलाई अलग–अलग दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । यो उपचुनाव थियो । यसमा मतदान पनि एकदमै न्यून भयो । अझ भन्न सकिन्छ यो चुनावमा स्थानीय मुद्दा उठाइएको थियो । साथै नरेन्द्र मोदी र अमित शाहले प्रचार–प्रसार पनि गरेनन् ।
अर्कोतर्फ समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाजवादी पार्टी एक भएर चुनावमा गएका थिए । यूपीमा बसपाको २० प्रतिशत भोटबैंक छ । त्यस्तै समाजवादी पार्टीको २० प्रतिशत भोटबैंक रहेको छ ।
यदि दुवै दल लोकसभाको चुनावमा पनि गठबन्धन बनाएर आए भने कुनै पनि प्रकारको रणनीतिले काम गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
योगी आदित्यनाथलाई झट्का
उप–चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा आएपछि समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेशकुमार यादवले सामाजिक न्यायको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर यस्तो भन्न अहिले नै अलि हतार हुन्छ । कमसे कम विधानसभा चुनावमा यो सफलता प्राप्त भयो भने त्यो भन्न सकिएला ।
तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि गोरखपुरको हार योगी आदित्यनाथलाई भने ठूलो राजनीतिक धक्का हो किनकि उनको आफ्नै गढका रुपमा गोरखपुर परिचित थियो । एक वर्ष मात्रै भयो उनी मुख्यमन्त्री बनेको । आफै पाँच पटकसम्म निर्वाचित क्षेत्रमा पार्टीले जित्न नसक्नुले मतदाता मुख्यमन्त्रीको कामकारवाहीबाट खुशी छैनन् भन्न सकिन्छ ।
मुख्यमन्त्रीले यो कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ कि मतदाताहरु किन भोट हाल्न निस्केनन् । उनीहरुको भोट समाजवादी पार्टीलाई किन गयो ? यही कुरा केशवप्रसाद मौर्यको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
यी दुई सिटका अलावा बीजेपीले बिहारको अररियामा पनि हारको सामना गर्नु पर्यो । जहाँ लालुप्रसाद यादवको राष्ट्रिय जनता दलले जित हात पार्यो । नीतीश कुमारको जेडीयू र बीजेपीको गठबन्धन आरजेडीका अगाडि फिक्का रह्यो ।
त्यस्तै यसैबीच यो कुरामा ध्यान दिनस पनि आवश्यक हुन्छ कि उप–चुनावमा कुनै रणनीतिले काम गर्दैन । यो यूपीमा भएको उप–चुनावले मात्रै होइन, भारतका अन्य राज्यमा भएका उप–चुनावले दिएको प्रमाण हो । लोकसभाको चुनावमा अहिलेसम्म बीजेपीले १० सिटमा हार बेहोरिसकेको छ । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि बीजेपीका लागि आउँदो दिन सुखद भने पक्कै हुने छैन ।
गठबन्धन राजनीतिको कमाल
सन् २०१४ को आम चुनावबाट क्षेत्रीय दलको राजनीति अब समाप्त हुने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर अब यो निश्चित भएको छ कि भारतमा क्षेत्रीय दलहरु अझ सशक्त रुपमै रहेका छन् । गोरखपुर, फूलपुर तथा अररियाको चुनावी नतिजाले क्षेत्रीय दललाई नयाँ जीवन दिएको छ ।
उत्तर प्रदेशको विधानसभा चुनावपश्चात बहुजन समाजवादी पार्टीको अवस्था निकै खस्केको थियो । समाजवादी पार्टीको पनि अवस्था लगभग त्यस्तै थियो । यस्तोमा आफ्नो अस्तित्व बचाइ राख्नका लागि दुवै दल मिलेर आउनुको विकल्प थिएन । यस्तै प्रयोग सन् २०१५ मा लालुप्रसाद यादव र नीतीश कुमारले गरेका थिए ।
अर्कोतर्फ चुनावी नतिजा आउनुभन्दा अघिल्लो रात सोनिया गान्धीले विपक्ष नेताहरुलाई डिनरमा बोलाएकी थिइन् । डिनरमा देशका विभिन्न २० राजनीतिक दल सामेल थिए । यस्तो अवस्थामा नरेन्द्र मोदीको विजयरथलाई रोक्न विपक्षीहरु एक ठाउँमा उभिन पर्ने आवश्यकता महसुस तथा सम्झौता भएको हुनुपर्छ ।
यो पनि हो कि २०१४ को तस्बिर बेग्लै थियो । २०१४ मा बीजेपीको सरकार एकदमै कम राज्यमा थियो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीका दावेदार थिए । उनी यूपीए सरकारप्रति आक्रामकताका साथ सवाल उठाएका थिए ।
मानिसहरु उनको विकासको कुरामा विश्वास गरिरहेका थिए । तर २०१८–१९ को तस्बिर भने बेग्लै रहेको छ ।
देशका २१ राज्यमा बीजेपीको सरकार छ । २०१९ मा मानिसहरु बीजेपीसँग प्रश्न गर्नेछन् । राज्य सरकारको कामकारवाहीप्रति आम मतदातामा आक्रोश रहेको छ । उनीहरु बीजेपीलाई हराउन भोट हाल्नेछन् । जे वाचा गरिएको थियो त्यो पूरा नभएकोमा नागरिक रिसाएका छन् । यही नै अहिले बीजेपीका लागि चुनौतिपूर्ण कुरा हो ।
तर उप–चुनावको नतिजाबाट यो भन्न सकिन्छ कि नरेन्द्र मोदीको जादु कम भैरहेको छ । उनी अहिलेको भारतका सबैभन्दा ठूला नेता पनि हुन् । उनको आफ्नै लोकप्रियता पनि छ तर उनलाई चुनौति दिनका लागि कैयौं राज्यमा क्षेत्रीय दलहरु तमतयार अवस्थामा बसेका छन् ।
वर्तमान अवस्थामा पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जी, ओडिशामा नवीन् पटनायक, तेलंगानामा टीआरए, तथा बिहारमा राष्ट्रिय जनता दल तथा उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाजवादी पार्टी आ–आफ्ना क्षेत्रमा नरेन्द्र मोदीलाई दमदार चुनौति दिइरहेका छन् । राज्यका जनता स्थानीय मुद्दामा पनि लोकसभामा भोट हाल्ने गर्छन् ।
यदि क्षेत्रीय दलले आम चुनावमा स्थानीयताको रंग दिए भने राष्ट्रिय छविको असरले केही असर गर्दैन । नरेन्द्र मोदी लोकप्रिय छन् तर उनी धेरै नै लोकप्रिय भएको मतदाताले आभाष गर्न थालेका छन् ।
तर मानिसहरु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रश्न सोध्नेछन् कि उनले गरेका वाचाहरु के भए ? तपाईँको मुख्यमन्त्रीले के काम गरे ? एन्टी इनकम्बेन्सीका फ्याक्टर बढ्दैछ । जब तपाईँको धेरै ठाउँमा सरकार छ भने असन्तुष्टि पनि त धेरै हुन्छ ।
बीजेपीको अगाडि अर्को चुनौति पनि छ । सन् २०१४ मा जुन लोकप्रियता मोदीको थियो, अहिले त्यही अवस्था छैन । ग्रामिण क्षेत्रका किसान एकदमै आक्रोशित छन् । उनीहरुसँग गरेका वाचा मोदीले पूरा गरेका छैनन् ।
पछिल्लो समय मुम्बईको सडकमा महाराष्ट्रका किसानको जुन प्रदर्शन भएको थियो, त्यस्तै दृष्य अन्य राज्यमा पनि छ । सबैतर्फका किसानमा सरकारप्रति आक्रोश छ भन्ने संकेत महाराष्ट्रको किसान आन्दोलनले दिएको छ ।
सन् २००४ मा साइनिङ इन्डियाको दौरानमा कांग्रेसले क्षेत्रीय दलसँग गठबन्धन बनाएर अटल बिहारी वाजपेयीको सरकालाई पराजित गरेको थियो ।